छापामार यात्रा – Janaubhar
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १०, २०६८ | 133 Views ||
घर छाडेको ठ्याक्कै २५ दिन पुगेको थियो ।
दैलेखको लेकमा हरायौँ । दुईवटा स्क्वायडका १४ र एकजना रुट गाइडसहित हामी हरायौँ । हिउँको धोर । बाटो कता हो । तर अन्धाधुन्ध हिँडिरह्यौँ ।
गाउँघरसँग सम्बन्धविच्छेद भएको पनि चार घन्टा नाघिसकेको थियो । कता पूर्व, कता पश्चिम ? हामी बेतालले हिँडिरहेका थियौँ । कम्मरसम्म हिउँ । हात–खुट्टा निलट्ठ । आफ्नो हो या कसैको ? महसुस नै नहुने ।
कालीकोट कहिले पुग्छौँ या कता लाग्दैछौँ ? प्रश्नको बिस्कुन फिँजिएको थियो ।
‘सिधा अगाडि हिँड्दै गर्नुस्’ भन्दै धेरै कुरो गर्न नै चाहेनन् कमरेड आकासले । सायद कमरेडहरू मुर्मुरिएको देखेर होला ।
आफूभन्दा लामा बन्दुक, ३० केजीका झोला । रातभरको अनिँदो । हिउँको यात्रा कम चुनौतीपूर्ण थिएन । थकित पाइला सर्नलाई मान्न छाडे नि हिँड्नुको विकल्प थिएन ।
धेरै कोस हिँडिसकेका थियौँ । त्यसैले फर्कन सम्भव थिएन ।
मध्यरातझैँ सुनसान थियो । घनघोर जङ्गल जहाँ हावा पनि निदाएजस्तो लाग्थ्यो । हिउँ नै हिउँ । हामी जति पाइला चाल्थ्यौँ उति नै सङ्कटको भासमा भासिन्थ्यौँ । यस्तो लाग्थ्यो– हामी त मृत्युको मुखमा आफै हाम फाल्दैछौँ ।
पहिलोचोटि घर छोडेर कर्णाली जाँदै थिएँ । ‘एक्लो नाति, नजा हामी कसरी भन्न सक्छम् र ? भटाभट मारिरा’को छ, बैरीले । ज्यान जोगाएर लड्नू । बाँचिन्छ भन्ने के ठेगान नै छ र ?’
रुँदै बज्यैले बिदाइ गरेको सम्झिएँ, हिंड्दाहिंड्दै । जीवन सङ्गिनी मोहनसरी रातभर रोएकी थिइन् ।
अँ, मदन दाइ (हाल, पाँचौं डिभिजन सहकमान्डर) लाई नयाँ आइडिया फुरेछ । कम्मरबाट खुकुरी झिकेर झपाझप रूख काट्न थाले ।
‘नभा’को मासी प्राण किन खर्चने ?’ मैले भनेँ । ‘हेर्दै जाऊ । के हुन्छ ?’ उनले भने ।
नभन्दै रूख ढाल्दै तेसार्दै बढेपछि छक्कै प¥यौँ । ‘ओ हो ! यसले साँघुको काम ग¥यो है !’ यति भनेर सबले काट्न थाल्यौँ । ‘धन्यवाद दाइ ।’ खुसीले नाच्यौँ। त्यसपछि ? हिउँमा डुबिएन ।
हाम्रो यात्राले कमिलाको यात्रासँग ठ्याक्कै मेल खान्थ्यो । पाँच सय मिटर हिँड्नलाई तीन घन्टा । नहोस् पनि कसरी ? रूख ढाल्दै जानुपथ्र्यो । भोक, प्यास, थकाइ र कष्ट एकैचोटि खप्नुपर्दा आँंखाबाट आँसु बरर झथ्र्यो । कता जाने ? के खाने ठेगान थिएन । ‘हिउँमा डुबेर मर्नुभन्दा दुश्मनका गोली खाएर मर्दा कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला ।’ आफैसित भनेँ ।
रुट गाइड आकास कमरेडमाथि शब्दका गोली छुट्न थाले । उनी डरले पानी पानी भएका थिए । ‘धेरै गाली नगरम् है भाग्लान् । उल्टै हरिबिजोक होला’ भन्दै कमान्डरले सम्झाए । मुहार कसैको पनि उज्यालो थिएन । ‘जति ओरालो झ¥यौँ उति हाम्रो कल्याण छ ।’ स्क्वायड कमान्डर हिमाल भन्थे ।
दुईवटा स्क्वायड । एउटा रुकुमबाट । अर्को रोल्पाबाट । रोल्पाबाट हितमानको कमान्डमा मदन, तमिल, म, रैजल, सन्देश र रविन थियौँ । रुकुमबाट हिमालको कमान्डमा सातजना ।
ओरालोतिर मोडियौँ । हिउँमाथि प्लास्टिक बिछ्याएर सरर्र ओर्लियौँ । चिप्लेटी खेलेजसरी । हिउँमाथि चिप्लिँदै जाँदा कसैका टाउकामाथि हुन्थे भने कसैका खुट्टा । ‘बन्दुक पड्केला । केप निकालेर राख्नुस् ।’ कमान्डरको आदेशपछि त्यसैगरी लड्दैपर्दै ओरालियौँ । त्यतिन्जेल घामले बिदाइको हात हल्लाइरहेको थियो । हाम्रा मन झनै खस्किन थाले । धुपीका बोट, चोयाका झाडी र बैंसका स–साना पोथ्रालाई लछार्दै ओरालिरह्यौँ ।
अलि तल झर्दा हिउँ पनि पातलिँदै गयो । मान्छे भेट्न सकिन्छ कि भन्ने आस पलायो । बल्लबल्ल आधा घन्टा लत्रिएपछि हिउँलाई छोड्यौँ । तैपनि मन खुसीले चौडा बन्न सकेन । न हामीसँग पानी थियो, न गाँस । बिदाइ गर्दा दिएको सातु बोकेका थियौँ । त्यै सातु दुदुई मुट्ठी खायौँ । एक थाल भात खानेलाई दुई मुट्ठी सातु आन्द्रामै कहाँ हरायो कहाँ ।
गाउँतिर झर्दा कतै पुलिस भा’को ठाउँमा पो पुगिने हो कि ? अपरिचित ठाउँ । अनचिनारू जनता । सिआइडी लागेर धरापमा पारे भने पार्टीले दिएको महान् अभिभारा चौपट्टै हुन्थ्यो । ‘चीनमा लम्बे अभियानताका लालसेनाले जुत्ताको तलुवा खाएर बाँचेका थिए रे ! साम्राज्यवादी जापानविरुद्ध लड्दाका ती गुरिल्लाको संस्मरण पढ्यौँ भने यी कष्ट फुच्चे हुन्छन् ।’ कमरेड हिमाल र कमरेड हितमानले सम्झाए । (कस्तो दुःखद् संयोग, हिमाल र हितमान ती दुवै कमाण्डर अहिले आन्दोलनमा छैनन् । उनीहरु नभए पनि जनयुद्धमा उनीहरूका नबिर्सने लगानी छ ।)
कतै पहरामा ठोक्किन त जाँदैछैनौँ ? आशङ्काका बादल मडारिए । ‘कतै सिआइडी त होइन ?’ रुटगाइडले त सम्बन्धित ठाउँमा सरासर पु¥याउनुपर्ने । खासमा कमरेड नै हो कि होइन ? पार्टीको मान्छेले त अनाहकमै दुःख त दिन्न नि ? हामी त रुटगाइडमै शंका काटेर भैँसीदेखि जोगी डराउने, जोगीदेखि भैँसी डराउने भयौं । शङ्का उपशङ्का उब्जिएपछि निवारणको लागि ज्यान र झोला तलासी गरियो । झोलाबाट क्षेत्रीय व्युरोको सर्कुलर र चिट्ठी फेला प¥यो ।
ती कमरेडले थरथरी काँप्दै भने, ‘कमरेड म दुश्मन होइन । भूगोल मेरो लागि पनि अपरिचित हो । जुम्लाबाट सुर्खेत विमानस्थलमा ओर्लिएर आएको ।’ तुरुक्क आँसु झारे । साथीहरू भने घाइते बघिनीझैँ आक्रामक थिए । ‘म पनि त एउटा सिपाही हुँ । यति धेरै शङ्कालु पाराले नहेर्नुस् । चिट्ठी र सर्कुलर हेरेर पनि विश्वास लागेन ? उ त्यो पारि कालीकोट हो । त्यहाँ जसरी नि पु¥याउँछु ।’ यति भनेपछि हाम्रो मनले केही शान्ति पायो ।
आफैँ त जङ्गलको बास । आफ्नै तरिकाले सुत्यौँ । कोही बसेर, कोही बार बारेर, कोही स्याउला बिछ्याएर, कोही बन्दुक सिरानी राखेर । ढल्नेबित्तिकै निदायौँ ।
चराचुरुङ्गीका कल्याङ्–बल्याङ्ले झङ्लङ्ग व्युँझिएँ । जतिखेर भोकले पेट काँपिरहेको थियो । दुःखकष्ट भएकोमा पश्चाताप भएन । सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न ? प्रश्न त्यतातिर मोडियोे । घर नजिकै रहेछन् भन्ने कुरा उज्यालो भएपछि थाहा भयो । सबैका घरका धुरीबाट धुँवा उडेर बादलसँग मिसिँदै थिए । ‘खाने मेसो गर्नुप¥यो,’ हितमान कमरेड बोले । ‘आकास कमरेड सम्पर्कतिर लाग्नुप¥यो ।’ मदन दाइले कुरा राखे ।
उतिखेर मदन दाइ स्क्वायड भि.सी. (सहकमाण्डर) थिए । ‘एकदम ।’ समर्थन जनायौँ ।
पेट चाउरी परिसक्यो । आँखा गडिसक्यो । खुट्टा लाग्दैन । भोकै त को लड्न सक्छ, बारुदबिनाको बन्दुक जस्तो । दानापानी पाए पो लडम्ला । तीन दिनको भोकले त फुक्दा पनि ढलिएला जस्तो भयो । महिनौँ दिन बिरामी परेर थला परे जस्तो ।
‘खाजा खजुलीको जोहो गर्नुपर्छ है,’ मैले भनेँ । ‘गाउँ पस्नु आत्मघाती हो ।’ सबैको ठम्याइ रह्यो । तर, भोकै बस्ने अवस्था पनि रहँदैनथ्यो । जोखिम उठाएरै म जान्छु भनेर हात उठाएँ । कमान्डर कमरेड हिमाल पनि तयार भए ।
दुवैजना गाउँतिर लाग्यौँ । चाउचाउ, बिस्कुट पहिलो प्राथमिकतामा थिए । नभए खाजा भुटेर ल्याउने कुरा भयो । ‘तिमी को हौ ? कता जाने ? घर कहाँ हो ?’ भनेर अवश्य सोध्नेछन् । के भन्ने त ? जानुअघि छलफल भयो । ‘हामी व्यापारी । घर दैलेख । कालीकोट जाने । आठजना छौँ । एकजना बिरामी परे । बाँकी प्रसङ्ग अनुसार गरौँला ।’ एक मतले पारित भयो । नभन्दै सोधपुछ गरे । मकैको खाजासम्म भुटेर साथीहरू कहाँ लान सफल भयौँ ।
तीन घन्टापछि खाजा लिएर पुग्दा धेरै साथी निदाएका थिए । कोही सेन्ट्री बसेका । जब खाजा लगेर त्यहाँ पुग्यौँ तब हितमान कमरेड तीन फन्को नाचे । त्यसपछि ? हामीलाई ढोग गरे । खाजा नखाँदै उज्यालिन थालेका अनुहार खाएपछि साँच्ची उज्यालिए । अनि त झन् खुसीको सिमै रहेन ।
उता, आकास कमरेडले पनि कालिकोट जिल्लाका कमरेडलाई भेटेर आए । मनभित्रका पीडा एकाएक हराए । आकास कमरेडसँग अँगालो मा¥यौँ । ‘अञ्जानमै के–के अपशब्द भन्यौँ । गर्न मिल्छ भने माफ गरिदिनुहोला ल ।’ हामीले भन्यौँ । ‘आकासभन्दा विशाल छाती भएको यो आकासले झिनामसिना कुरामा कमेन्ट गर्दैन ।’ आकास कमरेडले भने ।
पेटपुजा गरेपछि कुराकानी पनि अलि बढी नै आउँदो रहेछ । जङ्गलमै गफगाफ मच्चियो । ‘भेरी–कर्णाली पार्टीको मुखै हेर्न नपाई मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । बाँचियो यार ।’ यति भनेर तमिल कमरेडले हँसाए । ‘आज रातभर हिँड्नु छ । पुलिसचौकी पनि पार गर्नुपर्छ ।’ कमरेड आकासले जानकारी गराए । रातभर हिँड्नु, दिनभर सुत्नु हाम्रा दिनचर्या थिए ।
झमक्क रात प¥यो । हाम्रो यात्रा पनि आरम्भ भयो । चुपचाप पाइला चाल्यौँ । खाना खाने ठाउँ कालीकोटको डिल्लीकोटमा पुग्दा दस बजिसकेको थियो । ‘लाल सलाम है कमरेडहरू ! लाल सलाम, लाल सलाम !’ स्थानीय कमरेडसँग जोसिला हात मिलायौँ । तीन दिनको भोको । मन खानातिरै दौडेको थियो । ‘हात धुनुस् है । खाना खाऊँ ।’ अनुरोध आइसकेको थियो । ‘आकास कमरेड आज त चार थाल भात जान्छ होला । ज्यान खरासिएको छ ।’ हितमान कमरेडले सानो स्वरमा बोले । भात पस्काइ पनि विचित्रको थियो । थालमा सगरमाथा चुलिएको थियो । सपसप खायौँ । थोरै खानेले पनि दुई थाल । पकाउने र घरबेटीलाई पुगेन । कता–कता लाज पनि लाग्यो ।
खाँदाखाँदै झुल्न पो थाल्यौँ । एकअर्कालाई हेर्दै हाँस्न थाल्यौँ । ‘खानामा रक्सी त मिसिएको थिएन ?’ फेरि पनि हँसाए तमिल कमरेडले । त्यसरी मज्जाले हाँसेको त्यहीँ रात थियो । ‘तिम्रा बाजे भातले नि !’ ‘भातले पनि मताउछ र ?’ ‘धेरै दिन खान पाएन भने मताउँछ नि ।’ ‘हो त बाबू ।’ घरबेटी बाबाले पनि भने । हामी तिनछक् प¥यौँ ।
एघार नाघिसक्यो । धेरै बस्नु सुरक्षाको दृष्टिले पनि ठिक थिएन । हल्लाखल्ला आइसकेको रहेछ, ‘३५÷४० जना रोल्पा–रुकुमबाट बन्दुक बोकेका मान्छे दैलेखहुँदै कर्णाली छिरे ।’ सबैजना बन्दुक, झोला बोकेर कालो कालो धब्बाभित्र हरायौँ । औँसीको रात, एउटा लाठी र जूनकीरीको सहाराबाहेक सारा शत्रु जस्तै थियो त्यस रात ।
२०५४ फागुन २० मा घर छाडेका थियौँ । धेरैजसो रातमा हिँड्दाहिँड्दै बैशाख ५ गते मात्र हामी कालीकोटको मान्मा नजिक पुग्यौँ । त्यसपछि सुरु भयो भूमिगत जीवनशैली । ज्यादै कष्टप्रद जिन्दगी ।
त्यहाँ पुग्दा आगोको झिल्को मात्र थियौँ । जु्म्ला, कालीकोट, मुगु र हामी गरी जम्मा २८ जना डब्लु.टी.(पूर्णकालीन) कार्यकर्ता थियौं । बारबोर बन्दुक खोस्दै, कसैको सेबोटेज गर्दै, पुलिस चौकीका जवानलाई चौकीभित्रै थुनेर फटाहालाई कारबाही गर्दै जाँदा त त्यो सानो झिल्को डढेलोमा फेरियो ।
त्यसपछि बाँध फुटेर निस्केको पानी जस्तै हुलका हुल भूमिगत भए, पूर्णकालीन भए । कार्यकर्ता त फालाफाल । व्यवस्थापन गर्न नै हम्मेहम्मे प¥यो । जाली फटाहा त्राहीत्राही भए । त्यसपछि भने दुश्मनले पनि आफ्ना हर्कत बढाउन थाल्यो । १५÷१६ जना पुलिस, ७/८ वटा राइफल बोकेर हामीलाई खोज्न आउन थाले ।
‘भूमिका पूरा ग¥यौँ कमरेड हो,’ मदन दाइले भने । ‘ठिक हो ।’ समर्थन जनायौँ । रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सिन्धुली र रामेछापलाई दमन गरेर सिध्याउने सरकारी योजनालाई पुरै निस्तेज पा¥यौँ । विस्तारै विस्तारै खुला हँदै गयौँ । कार्यकर्ता बर्खामासको च्याउजसरी जन्मिए । एक्कासी सहिद कमरेड परिवर्तनको नेतृत्वमा एउटा स्क्वायडले हामीलाई फेर्न आयो । त्यसपछि ? हामी पुनः रोल्पा फर्कियौँ ।
Posted in संस्मरण/अनुभूति, साहित्य सिर्जना
Prevशान्ति र संविधान विथोल्न कांग्रेस एमाले सक्रिय
Nextअस्तित्व र जीन्दगी